Global Voices teny Malagasy · 5 Avrily 2019
05 Avrily 2019
Tantara tamin'ny 05 Avrily 2019
Eoropa Afovoany & Atsinanana05 Avrily 2019
Potika sy may ny fanantenan'ireo Rosiana hanana fidirana aterineto tsy misy sivana taorian'ny nametrahan'ireo manampahefana fitsipika hentitra sy fanarahamaso tanteraka ataon'ny governemanta amin'ny tetikasa mpisava làlana fizaràna ny Aterineto amin'ny alalan'ny zanabolana.
Sarimiaina Manazava Ny Fanohintohinan'ilay Lalànan'ny Fifandraisandavitra Ny Fahalalahana Miteny Ao Myanmar
Azia Atsinanana05 Avrily 2019
"Matetika ilay lalàna no ampiasain'ireo matanjaka mba hampanginana izay tsy mitovy hevitra aminy, ary miaraka amin'ireo tranga an-jatony mahery voarakitra, dia tena mandresy lahatra tokoa ny ho fiantraikany hihanaka amin'ny fahalalahana maneho hevitra."
Tari-dia: Mamerina ny bilaogy WordPress voasivana ho hita indray
Hafanam-po05 Avrily 2019
Faly ny Global Voices Advocacy mamoaka ny toro-lalana hafa Advocacy 2.0: Mirroring a Censored WordPress Blog.
Shina: Mahatsiaro an'i Hu Yaobang ny praiminisitra Wen
Tamin'ny taratasy misokatra nivoaka ny Alakamisy tao amin'ny People’s Daily, nampahatsiahy ny dia nahafinaritra niaraka tamin'ny praiminisitra teo aloha Hu Yaobang nogadraina sy nalàna baraka ny praiminisitra Shinoa Wen Jiabao. Mankalaza ny faha-21 taonan'ny nahafatesany ilay taratasy.